Iindaba - I-Rizobacter isungula unyango lwe-bio-seed fungicide i-Rizoderma e-Argentina
I-Rizobacter isungula i-bio-seed fungicide ye-Rizoderma e-Argentina
Kutshanje, i-Rizobacter iqalise i-Rizoderma, i-biofungicide yonyango lwembewu yesoya e-Argentina, equkethe i-trichoderma harziana elawula iintsholongwane zokungunda kwimbewu kunye nomhlaba.
UMatias Gorski, i-biomanager yehlabathi e-Rizobacter, ichaza ukuba i-Rizoderma yi-fungicide yonyango lwembewu ye-biological eyenziwe yinkampani ngokubambisana ne-INTA (iZiko leSizwe leTekhnoloji yezoLimo) e-Argentina, eya kusetyenziswa ngokubambisana nomgca wemveliso ye-inoculant.
"Ukusebenzisa le mveliso ngaphambi kokuhlwayela kudala iimeko zokuba iimbotyi zesoya zikhule kwindawo yendalo enesondlo kwaye ikhuselwe, ngaloo ndlela inyuse izivuno ngendlela ezinzileyo kunye nokuphucula iimeko zokuvelisa umhlaba," utshilo.
Indibaniselwano yezitofu kunye ne-biocides lolona nyango luqalwayo lusetyenziswa kwiimbotyi zesoya. Ngaphezulu kweminyaka esixhenxe yolingo lwasendle kunye nothungelwano lwezilingo lubonise ukuba imveliso iqhuba kakuhle okanye ingcono kuneekhemikhali ngenjongo efanayo. Ukongezelela, iibhaktheriya kwi-inoculum zihambelana kakhulu kunye nezinye iintlobo zefungal ezisetyenziswe kwifomula yonyango lwembewu.
Enye yeenzuzo zale bhayoloji kukudityaniswa kweendlela ezintathu zesenzo, ezithintela ngokwemvelo ukuphindaphinda kunye nokuphuhliswa kwezifo ezibaluleke kakhulu ezichaphazela izityalo (i-fusarium wilt, i-simulacra, i-fusarium) kwaye inqanda ukuchasana kwe-pathogen.
Le nzuzo yenza imveliso ibe yinto ekhethiweyo yokukhetha abavelisi kunye nabacebisi, njengoko amanqanaba aphantsi esifo anokuphunyezwa emva kokusetyenziswa kokuqala kwe-foliicide, okukhokelela ekuphuculweni kokusebenza kwesicelo.
NgokukaRizobacter, iRizoderma iqhube kakuhle kulingo lwasendle nakwinethiwekhi yovavanyo yenkampani. Ehlabathini lonke, i-23% yembewu yesoya iphathwa ngenye ye-inoculants eyenziwa yi-Rizobacter.
“Sisebenze nabavelisi abavela kumazwe angama-48 kwaye sifumene iziphumo ezincumisayo. Le ndlela yokusebenza isivumela ukuba siphendule kwiimfuno zabo kwaye siphuhlise itekhnoloji yokugonya ebaluleke kakhulu kwimveliso, ”utshilo.
Iindleko zokufakwa kwezitofu kwihektare nganye yi-US$4, ngelixa ixabiso le-urea, isichumiso senitrogen esiveliswe kwimizi-mveliso, malunga ne-US$150 ukuya kwi-US$200 ngehektare nganye. UFermín Mazzini, intloko yeRizobacter Inoculants Argentina, wathi: “Oku kubonisa ukuba imbuyekezo kutyalo-mali lungaphezu kwama-50%. Ukongeza, ngenxa yemeko ephucukileyo yesondlo sesityalo, umyinge wesivuno unokunyuswa ngaphezu kwe-5%.
Ukuze kuhlangatyezwane neemfuno zemveliso ezingentla, inkampani iye yaphuhlisa isitofu esinganyangekiyo kwimbalela kunye nobushushu obuphezulu, obunokuqinisekisa ukusebenza kakuhle konyango lwembewu phantsi kweemeko ezinzima kunye nokwandisa isivuno sezityalo nakwiindawo ezineemeko ezilinganiselweyo.
Itekhnoloji ye-inoculation ebizwa ngokuba yi-biological induction yeyona teknoloji ivelisa izinto ezintsha zenkampani. Ukungeniswa kwebhayoloji kunokuvelisa imiqondiso yeemolekyuli ukuze kusebenze iinkqubo zemetabolism zebhaktheriya kunye nezityalo, ukukhuthaza i-nodulation yangaphambili kunye nesebenzayo, ngaloo ndlela iphakamisa isakhono sokulungiswa kwenitrogen kunye nokukhuthaza ukufunxwa kwezondlo ezifunwa ziimbotyi ukuze zikhule.
“Sidlala ngokupheleleyo kwisakhono sethu sokuyila ukubonelela abalimi ngeemveliso zearhente yonyango oluzinzileyo. Namhlanje, itekhnoloji esetyenziswa kwintsimi kufuneka ikwazi ukuhlangabezana nokulindelwe ngabalimi kwisivuno, ngelixa ikhusela impilo kunye nokulungelelana kwe-ecosystem yezolimo. ,” waqukumbela ngelitshoyo uMatías Gorski.